Ekupheleni kwekhulu leshumi neshumi nesikhombisa, abakhi abaningi bezakhiwo zaseFrance baqala ukusebenzisa emisebenzini yabo emisha umqondo wokuqala - udonga olulodwa lwendlu lwalugcwele amafasitela. Bavumela ukwandisa ukukhanya kwekamelo, futhi futhi bebukeka banda isikhala. Imisebe yelanga ilungele ngokukhululekile phakathi kwabo, ikhanyisa ngisho nemizila, eyayivele ikhanyiswa ngokuhlakanipha, ngosizo lwebani izibani zamafutha.
Amafasitela ngaleso sikhathi ahluke ezinsukwini zanamuhla ngokuthi awazange agqamile - ngemva kwakho konke, ingilazi yayibiza kakhulu. Iwindi yokuqala yesiFulentshi ilungile, mhlawumbe, yayizobizwa ngokuthi umnyango, njengoba kwakuyi-sliding yensimbi noma iminyango yokugijima, ihlanganiswe ngamabhodi.
Amafasitela aseFrance, abaningi abawabiza ngokuthi i-panoramic, namanje athandwa eFrance nase-Italy. Zifakwe kokubili ezakhiweni eziningi ezikhungweni nasezikhungweni zangasese. Amafasitela anjalo asetshenziselwa iSoviet Union eminye imiklamo yezakhiwo eziphakeme eziseStalin, ezakhiwe kuma-50.
Amafasitela aseFrance, anezikhonkwane zamapulangwe noma amapulasitiki, ahlukaniswe abe izingxenye eziningana, agqamile ngaphandle kwalabo abaseduze. Lokhu kukuvumela ukuba uqinise ifreyimu, ngoba indawo yayo inkulu.
Iwindi leFrance alikwazi ukuhlukaniswa ngezigaba. Kodwa kulokhu kufanele kube khona Ifreyimu yenziwe nge-aluminium, futhi ingilazi kufanele ibe nzima.
Uma uqhathanisa lawa mafasitela ngemiklamo evamile, kubonakala ngokucacile ukuthi abanalo i-jumper ephakathi phakathi kwe-flaps. Lokhu kungenxa yokuqokwa kwalolu hlobo lwamawindi, nakho okuyizicabha. Iminyango yayo, ukuvula, kufanele ikhulule ngokuphelele ukuvula. Ukuze lesi simo sifinyelelwe, ama-flaps aphakanyiswe kuhlaka olwenziwe ngephrofayili yomklamo okhethekile, okwenza kube lula ukuwahambisa ohlangothini.
Iwindi laseFrance linenzuzo nezinsalela zalo. Ake sizame ukuwaqonda. Ake siqale ngombono wokuhlelwa kwemicabango - amawindi amahle kakhulu (isithombe sizoqiniseka ngakho). Uhlobo lwe-panoramic luvame ukukhulisa ukukhanya kwemvelo.
Amafasitela alolu hlelo avuselela kakhulu ingaphakathi lekamelo, ikakhulukazi uma phambi kwalo kukhona indawo yokupaka noma yimuphi omunye umhlaba omuhle. Uma indlu yakho isendaweni yokwakhiwa kwesakhiwo esisenyuka phezulu noma odongeni lwefektri elilahliwe, khona-ke le ndaba ihlukile. Khona-ke akenzi umqondo ukufaka ifasitela elinjalo - ngeke nje ukuhlobisa igumbi, kodwa kwenze kube nzima kakhulu.
Manje mayelana nokushiyeka. Yini engeyona ifasitela enhle kakhulu yaseFrance? Ukungalungi endaweni yokuqala kuyindleko ephakeme - cishe ama-ruble ayizinkulungwane eziyishumi nambili ngamamitha ayikwele. Ngaphezu kwalokho, kufanele sicabange ukuthi intengo yewindi izokhula uma umklamo usebenzisa ifilimu ebonakalayo, ifasitela elinamaqabunga amabili kanye nezinye izinketho ezengeziwe.
Olunye ukulahlekelwa kwefasitela laseFrance lizobonakala ngokushesha ngabamakhosikazi. Iqukethe phambi kwezingxenye "zezithulu". Uma bekhona kuhlaka lwamafasitela, elisesigodini esingaphansi, kuzoba nezinkinga lapho kuhlanzwa.
I-tank Septic yamasongo okukhonkolo: izici zedivayisi
Kuyini "amabhuloho abandayo". Indlela yokugwema amabhuloho abandayo ngesikhathi sokuthungwa okushisayo
Kanjani ukugcina beet? Funda izimfihlo eside ukonga empandeni izitshalo